Undelete Matafura Kubva Ekuwana Dhatabhesi - Iyo Nhanho-nhanho Nongedzo
musha > Products > DataNumen Access Repair > Undelete Matafura Kubva Ekuwana Dhatabhesi
Undelete Matafura Kubva Ekuwana Dhatabhesi
Kana yako bvisa mamwe matafura kubva kuMicrosoft Access dhatabhesi (.mdb kana .accdb mafaera) nekukanganisa uye iwe uchida kuitora, unogona kushandisa DataNumen Access Repair kuverenga iyo .mdb kana .accdb mafaera uye kudzoreredza matafura akadzimwa kubva kumafaira zvakanyanya sezvinobvira.
Cherechedza: Usati wadzosera matafura akadzimwa kubva kuAccess mdb kana accdb faira ne DataNumen Access Repair, ndapota vhara Microsoft Access uye chero mamwe maapplication anogona kuchinja iyo mdb kana accdb faira.
Dzvanya "Sarudzo" tebhu, uye ita chokwadi "Dzorera matafura akadzimwa" sarudzo inotarirwa.
Sarudza iyo Access mdb kana accdb faira kuti igadziriswe:
Iwe unogona kuisa iyo mdb kana accdb filename zvakananga kana tinya iyo
bhatani rekutarisa uye sarudza iyo faira.
By default, DataNumen Access Repair ichachengetedza iyo yakamisikidzwa Yekuwana dhatabhesi mufaira nyowani inonzi xxxx_fixed.mdb kana xxxx_fixed.accdb, uko xxxx ndiro zita reiyo sosi mdb kana accdb faira. Semuenzaniso, yefaira Damaged.mdb, iro zita rekutanga reiyo yakagadziriswa faira ichave Yakakuvadzwa_fixed.mdb. Kana iwe uchida kushandisa rimwe zita, ndokumbira usarudze kana kuriseta saizvozvo:
bhatani, uye DataNumen Access Repair kuda start kuongorora uye kudzoreredza matafura akadzimwa kubva kune sosi mdb kana accdb faira. Kufambira mberi kubhawa
Mushure mekugadzirisa maitiro, kana mamwe matafura ari musosi mdb kana accdb dhatabhesi anogona kudzoreredzwa zvinobudirira, iwe uchaona bhokisi remeseji rakadai.
Iye zvino unogona kuvhura yakatarwa mdb kana accdb dhatabhesi neMicrosoft Access kana zvimwe zvinoshandiswa uye woongorora kana matafura akadzimwa apora zvinobudirira.
Cherechedza: Iyo demo vhezheni icharatidza inotevera meseji bhokisi kuratidza kubudirira kwekudzoreredza:
kwaunogona kudzvanya iyo
bhatani kuti uone mushumo wakadzama wematafura ese, minda, matafura, hukama uye zvimwe zvinhu zvakawanikwazve, seizvi:
Asi iyo demo vhezheni haizoburitse iyo yakamisikidzwa faira. Ndapota Raira iro rakazara vhezheni kutora iyo yakagadziriswa faira.